Umaki: ukukhangiswa kwebhodi lezikhangiso | Martech Zone
Umaki: ukukhangisa kwebhodi lezikhangiso
Ukuhamba kwe-UZE: Ipulatifomu Yemakethe Yezentengiso Zedijithali Ezingaphandle Kwekhaya
NgoLwesihlanu, Novemba 27, 2020 NgoLwesihlanu, Novemba 27, 2020 Douglas Karr
Ngesikhathi salo bhubhane, imakethe yezokukhangisa yathola ukushaya. Kulindelwe, kunjalo, kepha ukwehla kwe-19.1% ku-H1 220 kungumthelela omkhulu emabhizinisini. I-COVID-19 isishintshe isimo somthengi, njengoba inezinye izici eziningi zempilo yansuku zonke. Abantu bahamba kancane futhi basebenzisa okuncane. Ubhadane ngithemba ukuthi luzophela ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, kepha lezi zinyanga sezikhulise izinguquko ezibalulekile ebezivele zivele ezweni lezikhangiso. Iselula
ULwesihlanu, July 2, 2010 NgeSonto, ngoJuni 21, i-2015 Douglas Karr
Bengishayela eWest Side yedolobha, ngibheke ngaphesheya ebhodini, futhi kukhona ibhodi lokukhangisa lamathuluzi. Esikhundleni sokuthi ibhilibhodi ibe yisikhangiso esijwayelekile, isikhangiso sahamba saze safika phansi. Ingalo yanyusa iposi futhi ithuluzi langempela lalisendaweni ye-billboard. Kwakungathi ingalo yayiphuma ngqo emhlabathini. Ukube bengidinga isando, benginga
Ukuhlanganisa Iselula kube Isu Lokukhangisa Ngaphandle
NgoLwesithathu, July 15, 2009 NgeSonto, ngoJuni 21, i-2015 U-Adam Encane
Ukumakethwa Kwamaselula kuyavela futhi kuba yinto ejwayelekile nsuku zonke. Ngesonto eledlule ngangivakashele umndeni endaweni yaseMyrtle Beach futhi ngabona leli bhodi. Kwakukuhle ukubona ukukhanga okukhulu kuhlanganisa iselula kucebo labo lokumaketha jikelele. UDoug unokuhlanganiswa okufanayo kweselula kusayithi lakhe, ungathumela uMartechLOG ku-71813 bese uthola isexwayiso lapho ethumela! Ngisike i-shortcode kulesi sithombe ukuze kungabikho muntu ongalingeka